SAVORY: DHAN OO KU SAABSAN DHIRTA SII KORDHAYA - DHIRTA DAWOOYINKA
Savory ama chobre, oo sidoo kale loo yaqaan cawska biber, waa mid aad u kariye, hal sanno, qumman, cawska yar oo geedo yar yar ilaa 70 cm.
Qalabka cawska basbaaska waxaa lagu daboolaa cantoobo, caleemuhu waa cidhiidhi oo leh caaro fiiqan, cagaar madow oo midab leh. Geedka ubaxyada ayaa leh ubaxyo yar yar, midab jaalle ah ama ubax casaan ah.
Savory waxaa loo tixgeliyaa warshad malab wanaagsan. Seeds of midabka madow mugdi, karo Gagaab xitaa ka dib toddoba sano oo kaydinta.
Dalal Oriental ah iyo meelaha Mediterranean ah waxaa loo tixgeliyaa meesha lagu magacaabo chabra. Warshadu waxay leedahay taariikh aad u weyn.
Ma taqaanaa? Dadka deggan Roma ayaa waxay rumaysnayd tayada mucjisooyinka ah ee cawska qallalan. Waxaa la aaminsan yahay in adigoo xiranayo wejiga qolofta, waxaad wanaajin kartaa xasuusta oo caddayn kartaa maskaxda. Si kastaba ha ahaatee, wakiilada kaliya ee sarrifka ugu sarreeya ayaa awoodi karaya sida raaxada oo kale, sidaas awgeed wakhti ka dib, caleemaha cawska qafiifku laftiisa ayaa calaamad u ah dhiigga buluugga ah oo ka mid ah kuwa ugu caansan.
Dhirta basbaaska waxaa badanaa loo isticmaalaa dhirta si ay u bixiso suxuunta dhadhan macaan. Savory waxaa lagu daraa suxuunta hilibka, maraqa, suugada, suxuunta dhinaca iyo xitaa waxyaabaha caanaha laga sameeyo.
Fresh, oo ay la socdaan basil iyo dhirta, cawska basbaasku waa wanaagsan yahay in lagu daro pickles si loo ilaaliyo yaanyada, qajaarka, boqoshaada. Sidoo kale, geedkan waxaa loo isticmaalaa hilibka sigaarka iyo sausages. Noocyada gaarka ah ee chabra waxaa lagu bixiyaa sicirka hooseeya marka la barbardhigo, tusaale ahaan, dhirta sida dhoobada, basbaaska ama toon.
Ma taqaanaa? Dalka Ruushka, dukumiintiisa waxaa lagu fuigated lo'da dhalmada iyo caanaha Krynki la daweeyay - waxaa la rumaysan yahay in caanaha suunka noocaas ahi aysan soo jeedin waqti dheer.
Marka laga reebo karinta, dhirta basbaaska waxaa sidoo kale loo isticmaalaa dhir daawo: waxay leedahay bakteeriyada iyo xoojinta guryaha, waxay hagaajisaa habka dheef-shiidka, waxayna sahlaysaa socodka angina iyo cudurrada neefsashada ee neefta.
Shaaha ka soo chabra waxay leedahay dhadhan wanaagsan, taas oo kaalin muhiim ah ka qaadata habka daaweynta.
Sida loo doorto meel loo beerayo chabra beerta
Kaydka beerta waxaa lagu matalaa noocyo kala duwan, midkoodna waa xulasho, beerashada, sida caadiga ah, wuxuu dhacaa dhul furan. Si kastaba ha noqotee, maadaama uusan qof kastaa fursad u helin inuu koro beerta beerta, waxaad ku beeran kartaa geedka daaqadahaaga oo uu leeyahay caws cusub oo udambeysan oo cagaaran oo dhan gacanta ku haya inta lagu jiro jiilaalka.
Halkee laga gooyn karaa sunta
Cawska basbaaska waa geedka iftiin-jecel, sidaas darteed meesha ay beerashada waa in ay furan, diiran oo qorrax leh. Goobaha mugdiga ah, cawska udambeeya ayaa dareensan raaxo la'aan.
Dhibaatada ayaa si xun ugu dhacda caws, sidaas darteed ka hor inta aan laga beerin cawska, meeshan loo dhigo beeritaanka waa in si buuxda loo nadiifiyaa dhirta ka baxsan, ugu horreyntii, laga bilaabo kuwa ku jira caleemaha xididka ama ku dhufanayaan dhulka hoostiisa.
Savory wuxuu qabsan karaa shaqooyinka qurxinta, cawsku wuxuu qurxin karaa buurta alpine, balli artifishal ah ama waddooyinka beerta, marka markaad dooranaysid meel aad gasho waxaad isticmaali kartaa fursada inaad ku biiriso ganacsi farxad leh.
Waa maxay ciidda loo baahan yahay beeritaanka
Ciidda dufan, iftiinka halbeegga, ayaa ugu haboon cawska qandhada leh. Heerka pH ma aha wax ka hooseeya 6. Dareemku si wanaagsan ayuu u koraa qumanka ama ciidda boodhka leh. Waa muhiim in ciidda uu dabacsan yahay (si wanaagsan) iyo qoyan dhexdhexaad ah.
Beerta Savory: xeerarka soo degaya
Beerta xayawaanka waxaa laga koray abuurka, sidoo kale, cawsku wuxuu si fiican u soo saari karaa isaga oo is-abuuraya, sidaas darteed, si fiican u beeray geedka mar, sannado badan oo ay yimaadaan waxaa suurtagal ah in lagu maamuuso cawska cusub ee kareysa oo aan lahayn kharash dheeraad ah.
Goorma ayaa ah waqtiga ugu wanaagsan ee lagu beerayo duufaanta
Daaqsiinta beerta waa geedka sanadlaha ah, markaa jawaabta su'aasha ah marka ay beerto waa mid cad: horaanta gu'ga, dabcan. Isla markiiba waxaad ku beeran kartaa dukumintiga dhul furan, laakiin waa wax aad ufiican oo lagu kobcinayo jiilkaan marka hore laga soo saaro weelasha geedo.
Beeridda ayaa la sameeyaa horraanta gu'ga bilawga bisha Maarso. Marka cimiladu ugu danbeyn soo fiicnaato, macdanta caleenta ah, oo aan walwal lahayn, waxaa lagu beeray goobta horey loogu qoondeeyay ujeedooyinkaas.
Waxaa haboon in la sameeyo tan dhamaadka May, ka dibna ka hor xilliga dayrta cawska wuxuu yeelan doonaa wakhti uu ku marayo wareegga nolosha oo dhan iyo siin abuurka. Haddii dabiiciga lagu beeray si toos ah dhul furan, tan waa in la sameeyo wax yar ka hor - laga bilaabo dabayaaqadii Abriil ilaa horraantii May, laakiin waxaad u baahan tahay in lagu hagaajiyo cimilada, sababtoo ah caleemaha chabra uma dulqaadanayo dhaxan.
Haddii shimbiraha lagu koro xayawaanka daaqada, wakhtiga beerto wax badan maaha, laakiin la siinayo dhererka iftiinka, dhirtu waxay dareemeysaa raaxo iyo horumar sida caadiga ah, way ka fiicantahay in la sameeyo bisha Maarso.
Sida badiil ah, qaabka jiilaalka ee beeridda qashinka basbaaska ayaa badanaa la isticmaalaa. Ka dib markii bilawga ah cimilada qabow ee joogtada ah, sidaa darteed abuurka ma biqin wakhti ka hor, waxaa lagu beeray grooves leh qoto dheer oo 0.5-1 cm, ka dib markii kaas oo ciidda si fiican u tamped hoos ka kor. Sariirta sare waxay noqon kartaa budada leh humus ama digada.
Aabayaasha of Chabra
Cawska basbaasku si wanaagsan ayuu u koraa meelo horay u soo galaan khudaar sida kaabajka, qajaarka, yaanyada, baradhada iyo khudaarta cagaaran, si joogto ah lakulmiyo arrimo dabiici ah.
Sidoo kale walxaha habboon ee cawska qallalan waa badarka miraha, sidoo kale dalagyada xilliga qaboobaha ee lagu beeray ciidda si fiican loo beeray oo la nasasiiyay. Dhaqamada noocan oo kale ah ayaa si fiican loo nadiifiyaa haramaha, si xun u saameeya kobaca chabra.
Kuwa ka soo horjeeda xun ee geedaha basbaaska ah waa mid ka mid ah qaraabadeeda oo ka soo jeeda qoys yar oo yar yar iyo malab, kalluunka, basil, ubogada, sage, marjoram, marjoram, iwm.
Savory wuxuu dalbayaa dalab aad u sareeya bacriminta ciidda, marka hore ka hor beerashada cawska, goobta waa in la bacrimiyo oo kaliya ka dib markii lagu beeray abuurka. Qodobka ama digada lagu beeray waxaa loo isticmaalaa dharka ugu sarreeya. Cawska bacriminta ayaa u baahan in la qodo oo qoto dheer, oo la waraabiyo oo la waraabiyo.
Waa muhiim! Bacaha waxaa lagu beeray qoto dheer oo qoyan - oo aan ka badnayn 1 cm, haddii kale waxay noqon doontaa mid aad u adag abuurka yar yar si uu u biqlo. Masaafada u dhaxaysa safafka waa inay ahaataa ilaa 15 cm.
Si loo diyaariyo abuurka beeritaanka iyo si loo hubiyo biqilka ugu fiican, waa in marka hore lagu qooyay maalin, ku duudduuban tuwaal qoyan, ka dibna la qalajiyey isla markiiba lagu beeray. Abuurka noocan ah ayaa Gagaashid 3 toddobaad kadib.
Xeerarka daryeelka ee chabra beerta
Si aad u hesho dalagga wanaagsan ee chabra, ma aha mid ku filan in si fiican loo beero, dhirta sidoo kale waxay u baahan tahay in la siiyo daryeel habboon.
Intee jeer ayaad u baahan tahay inaad waraabiso daaqada
Baahida daaqsigu waxay u baahan tahay biyo yar. Inta lagu jiro mudada biqilka abuurka, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in ciidda uusan engegin adigoo si tartiib ah u sifeynaya sariirta maalin kasta.
Marka uu geedka korayo, waxaa la waraabiyaa sida cawska cawska caadiga ah - iyadoo ku xiran heerkulka iyo qalalan ee dhulka hal mar ama laba jeer toddobaadkii.
Waa muhiim! Savory ma u dulqaadanayo boodhka!
Xeerarka daryeelka carrada
Wixii Chabra ah, maqnaanshaha cagaaran waa mid aad u muhiim ah, sidaas darteed aagga lagu beeray leh warshad waa in si joogto ah u wejiga iyo nadiifiyaa haramaha. Intaa waxaa dheer, for chabra, carrada dabacsan waa lagama maarmaan, taas oo gaar ahaan muhiim u tahay in lagu xakameeyo cimilada kulul, marka dhulku ka baxo oo dhagax noqdaan.
Nidaamkani wuxuu ku siinayaa aerosiga warshad lagama maarmaanka ah ee lakabyada sare ee carrada, sidoo kale wuxuu gacan ka geystaa in qoyaanka dhulka lagu hayo. Intaa waxaa dheer, thanks thanks to carrada dabacsan, dhaqanka waxaa si fiican loo bixiyaa nafaqooyinka muhiimka ah iyo xubno raad.
Sida loo quudiyo geedka
Savory - warshad aan qabin, laakiin sida aad u daryeesho isaga, waxay ku xiran tahay xajmiga miraha, iyo tayada.
Ka hor inta beerto iyo isla markiiba ka dib goosashada geedka dayrta, ciidda waa in la bacrimiyo macdanta macdanta adag, tusaale ahaan, la diyaariyo nitrogen-fosfooraska-potassium (nitroammophoska). On baaldi biyo ah isticmaalaya 15-20 g of daroogada.
Sidoo kale, ka hor inta beero, HOL waxaa lagu dabaqi karaa ciidda at 10-20 g halkii mitir ah. Savory sidoo kale waxay u baahan tahay bacarimiso si joogto ah ula arrinka organic, taasina si gaar ah ayey muhiim ugu tahay cawska koray ee windowsill.
Sidee iyo goorta la goosanayo chabra
Savory waa geedo aad u faa'iido badan oo udgoon, laakiin si loo ilaaliyo dhammaan maadooyinka ku jira, dalagga waa in la goosto marxaladaha hore ee ubax (taas oo aan ka reebin suurtagalnimada in caleemaha laga soo saaro salad xilliga oo dhan).
Cawska khafiifka ah waxaa lagu jajabiyaa mindi fiiqan si aan caleemaha ugu badnayn 10cm ka badan oo dhulka ka baxsan, sida dhirta cusub, waxaad u isticmaali kartaa geedka isla markiiba ama waxaad ku ridayaa galaas biyo ah si ay u ilaaliso cawska aan lahayn sababa dhowr maalmood.
Wixii kayd ah oo dheer, kaydka ayaa muhiim ah inaad qallajiso. Si arrintan loo sameeyo, waa in la gooyaa laamaha ku jira lakabka keliya ee dusha sare ee qallalan (oo la doorbidayo dhar ama xajin) oo lagu meeleeyo meel fiican oo hawo leh, laga ilaaliyo qoraxda tooska ah.
Marka cawsku gebi ahaanba qalalan yahay, caleemaha iyo sariiraha ubaxa waa in la gooyaa oo lagu kaydiyaa weelasha daboolka si fiican u xiran ama bacaha dhogorta ah. Cawska si joogto ah u qalalan waa in la hubiyaa calaamadaha da'da.
Seeds of chabra waxaa laga helaa by jarida warshad si buuxda u tuntay iyo u daadiyaan ilaa qalajinta by sariiro ubax hoos u gudbin hore u faafin warqad. Ka dib markii miraha ay qubaysteen, waxay u baahan yihiin in si buuxda loo qalajiyo oo loo dhigo kaydinta bacaha warqadda.
Cawska khafiifka ah waa miro yar oo aan la qabin marka la beerto iyo daryeelka, laakiin beergooyska, iyada oo la tixgelinayo suurtagalnimada kaydinta muddada dheer, ayaa laga yaabaa inay socoto dhowr sano, halka inta lagu jiro xilliga kuleylka ah ee dhirta qurxinta quruxda badan leh, dabeecad ahaan u habboon beerta, waxay ku farxi doontaa indhaha oo leh muuqaal ubax ah iyo caraf udgoon, isla mar ahaantaas oo ah ilaha cusub ee cagaarka ah ee loogu talagalay cuno fara badan.